हिड्दा हिड्दैमा आकाशले कती लिए पारिश्रमिक ? « Mazzako Online
हिड्दा हिड्दैमा आकाशले कती लिए पारिश्रमिक ?
अभिनेता आकाश श्रेष्ठले लकडाउनपछि एउटा सिनेमा साइन गरे । सिनेमाको नाम हो, हिड्दा हिड्दै । सामाजिक पारिवारिक कथामा यो सिनेमा बन्नेछ । आकाशले यो सिनेमाको कथा मन परेकाले काम गरेको बताएका छन् । सिनेमा हिड्दा हिड्दैका लागि अभिनेता आकाश श्रेष्ठले महंगो पारिश्रमिक लिएको चर्चा छ ।
आकाशले १० लाख भन्दा बढी पारिश्रमिक लिएर यो सिनेमा साइन गरेको चर्चा चलेको हो । आकाशले फिल्म पोई पर्यो कालेका लागि पनि महंगो रकम लिएका थिए । आकाशको क्रेज बढ्दै गएपछि उनलाई लिएर सिनेमा बनाउने निर्माताहरुको सूची पनि लामै छ ।
आकाश म्यूजिक भिडियोमा पनि व्यस्त छन् । नेपाली सिनेमामा अभिनेताहरुमा केहीले महंगो रकम लिएर फिल्ममा काम गरिरहेका छन् । आकाशले पनि महंगो अभिनेताको रुपमा आफूलाई उभ्याएका छन् । तर, सिनेमा चलाउनुपर्ने जिम्मेवारी पनि उनमा छ ।